Mixpanel: Omenala, Ihe Omume Merenụ | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 16, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kedu ihe bụ ihu peeji gbasara gị ahịa? Ị maara? O doro gị anya? Amaara m na mgbe ụfọdụ anyị na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ na o nweghi ihe o mere, na oge ndị ọzọ anyị na-enweta ọmarịcha nleta ole na ole na-eduga na mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa. Ozi ahia banyere ahia bụ na ihe ka mma ka anyị niile soro ndu. Ma, ànyị kwesịrị?
Anyị edeela banyere ime ihe nchịkọta tupu - dị ka Pirate Metrics maka ndenye aha ndị azụmahịa. Ọgbọ ọhụrụ a nke nchịkọta ngwa anaghị arụ ọrụ otu metrik anyị na ya rụkọrọ ọrụ n’ime iri afọ abụọ gara aga. Ha na-arụ ọrụ onye ọbịa na-eme ka ha na-agagharị na saịtị gị.
Mixpanel bụ ihe omume-chụpụrụ nchịkọta ikpo okwu wuru ka emebere ya idozi na saiti obula, ntaneti webusaiti ma obu ngwa ekwenti.
Mixpanel kacha elu nchịkọta ikpo okwu maka mkpanaka & weebụ. Kama ịlele nlele peeji, ọ ga - enyere gị aka inyocha ihe ndị mmadụ na - eme na ngwa gị. Omume nwere ike ịbụ ihe ọ bụla - onye na-ebugo foto, na-egwu vidiyo, ma ọ bụ na-ekerịta post, dịka ọmụmaatụ.
Ngwakọta ngwakọta Mixpanel na-enye gị ohere ịmegharị ihe omume, jikọtara akụrụngwa na mmemme ndị ahụ, ma jikọta data profaịlụ na ndị mmadụ. Nke a bụ ebe ezigbo anwansi na-eme! Site na profaịlụ profaịlụ ahụ, ị ​​nwere ike inyocha ọdịnaya ahụ iji lekwasị onye ọrụ ahụ anya, zipụ ozi-e, dezie ozi-e, zipụ ozi ederede, na / ma ọ bụ bute ozi ntinye aka.
Na, n'ezie, ihe omume kasịnụ bụ ịzụta ya Mixpanel captures tọghatara nakwa.
Akwa post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta! Ọ bụ ihe ọmụma n'ezie ..